बैंकिंग जॉब दुबई मा - संयुक्त अरब अमीरात मा क्यारियर अवसरों को लागि आवेदन
दुबईमा बैंकिंग रोजगारमा जानुहोस्
दुबै 2018 मा फ्रेशर्सका लागि रोजगारी
डिसेम्बर 8, 2017
बैंकिङ जॉब दुबईमा
दुबईमा बैंकिंग रोजगार, यस कारणका लागि, हाम्रो कम्पनीले स्वतन्त्रताको धन खोज्न मद्दत गर्‍यो। ती अवस्थाहरूमा, हामी तपाईंलाई दुबई बजारमा कसरी बैंकमा क्यारियर खोज्ने भनेर मार्गदर्शन गर्न चाहन्छौं। यसबाहेक, हामी अब पनि मद्दत गर्दै छौं ब्लूमबर्ग मा कैरियर को लागि। दुबई सिटी कम्पनीले क्यानाडा उद्देश्य, भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब र कतारका लागि जागिर खोज्ने क्रममा क्यारियरको उद्देश्यलाई सहयोग पुर्याउन मद्दत गर्दछ। तदनुमा सहभागी हुन र बैंकिंग सेन्टरमा क्यारियर सुरू गर्न मध्य पूर्वमा अझ लोकप्रिय छ।
धेरै शीर्ष मूल्याङ्कन गरिएका कम्पनीहरू, ती परिस्थितिहरूमा, नयाँ कर्मचारी पत्ता लगाउने पूर्वनिर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय विवरण प्राप्त गर्न सबै बाहिर जानुहोस्। त्यसो गर्दा बैंकिंग भर्ती क्षेत्रहरू कायम राख्दै संयुक्त अरब अमीरातमा मान्छे खोज्ने रोजगारीका लागि उत्तम कार्य.
औंल्याउन सबै अरबी दुनिया मा राष्ट्रीय दृष्टिकोण जुन बैंक क्षेत्र संयुक्त अरब एमिरेट्समा स्थापना भएको थियो। हामीले सिर्जना गरेका छौं सबै भन्दा राम्रो क्यामेरा अवसर जहाँ तपाइँ तपाइँको आफ्नो पुनःसुरु फर्वार्ड गर्नुपर्छ दुबई मा बैंक रोजगार। बैंकिंग मा क्यारियर को लागी सब भन्दा सम्मोहक प्रमाण हो कि तिनीहरूले बढ्दो अवस्था को प्रस्ताव गर्छन्। यसका साथ एक बैंक क्षेत्र मा बौद्धिक गुनासो र व्यवसाय ज्ञान साझा। सामान्यतया व्यवसायको लागि विशेष व्यक्तिमा आचरण बोल्दै व्यावसायिक क्यारियर विकास.
अहिले हाम्रो सबै कम्पनीले जूनियरबाट वरिष्ठ क्यारियर चाहनेहरूलाई मुख्य रूपमा मद्दत पुर्याउँछ एशिया बाट दुबईमा अचम्मको क्यारियर निर्माण गर्दै। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रूपमा स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यको लागि। दुबई शहर कम्पनी नौकरी खोज कार्यक्रम 2016 पछि धेरै गतिशील बने। यो मनमा, हामी आशामा रहेको छ कि हाम्रो क्या क्यारियरले मद्दत खोज्छ र तपाईंलाई दुबई बैंकमा तपाईंको क्यारियरको सजावटमा सहयोग गर्दछ। डराउनुको लागी कि बैंक क्षेत्रमा पर्याप्त अनुभव नभए पनि हामी तपाईंलाई क्यारियर परिवर्तन गर्न मद्दत गर्न सक्षम छौं.
दुबईमा बैंक क्यारियरमा जानुहोस्
दुबई सिटी कम्पनीले रोजगारीको नियोक्ताको साथ एक क्यारियर को लागी मानिन्छ। बैंकिंग सेक्टरमा क्यारियरले तपाईंलाई सहयोग पुर्याउन मद्दत पुर्याएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने, हाम्रो फर्मले काम पाउन मद्दत गर्नेछ तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ र तपाई दुबईको लागि कहाँ हुनु चाहानुहुन्छ।
यद्यपि यो सत्य हुन सक्छ सउदी अरबबाट दुबई बाट फर्काइएको छ, कुवेत र भारत विश्व भर को यात्रा। हामी अब पुरानो समय भन्दा फरक छौं र मान्छेहरू संयुक्त अरब एमिरेट्समा बैंकिंग रोजगारमा लागेका छन्। तथ्यको रूपमा, हाम्रो टीमले यो पुष्टि गरेको छ कि जब युवाहरूले वित्तीय विद्यालय छोडे। तिनीहरूले एक बैंकि jun जुनियर स्तर रोजगार प्राप्त अवसर र त्यसपछि जीवनको लागि आफ्नो काम सुरुe यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै दुबई शहर कम्पनीले केहि अनुसन्धान गरेको छ।
र पहिलो स्थानको लागि ताजा रूपमा एक्सटेट महिला स्नातक गरियो यो प्राय: जहिले पनि एक बैंक क्यासियर हुन्छ। ताजा स्नातक विदेशी प्रवर्द्धनहरूको उद्देश्यको लागि। सामान्यतया, बैंक शाखामा सहायक प्रबन्धकको प्रगतिमा केहि बर्ष लाग्न सक्छ। ती परिस्थितिहरूमा, व्यवस्थापक स्थितिमा पदोन्नती हुँदै 3-5 बर्ष दुबई शहर मा समय लिनुहोस्.
बैंकिंग रोजगारी दुबईका लागि भारतीय
यस समय त्यहाँ धेरै छन् खाडी क्यारियरका लागि भारतीय एक्सटेट्स। विशेष गरी ती एमबीए संग दुबई मा नौकरिहरु को लागि राम्रो अनुभव संग। पछिल्ला वर्षहरुमा नयाँ उम्मेद्वारहरु आफैलाई सोध्छन् दुबईमा कसरी बैंकिंग रोजगार पाउने? तर उत्तर प्रबन्ध गर्न कहिले सजिलो हुँदैन। विश्व भर बाट धेरै नयाँ आगन्तुकहरु। यो सोच राख्नु भनेको धेरै पैसा कमाउने तरिका हो। तर विश्वको वास्तविकतामा व्यक्तिहरू जसले बैंकि industry ईन्डस्ट्रीमा क्यारियर सुरू गर्न प्रबन्ध गर्छन्। भन्दै यो धेरै विस्तृत र अवसर प्रबन्ध गर्न गाह्रो छ। चलाख व्यक्तिका लागि पनि।
केहि वर्ष पहिले जब मध्य पूर्व फल्दै थियो। र जब नयाँ रोजगारहरू दुबई र अबु धाबीमा आँधीबेहरी जस्तै सर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्यारियर खोजीकर्ता दुबई बसाई सरेका छन्। विशेष गरी नयाँ प्रोजेक्ट बाट दुबईमा दक्षिण अफ्रिकाका रोजगारीको लागि बाँच्न आउनुहोस्। त्यसोभए नयाँ क्यारियर शिकारीहरू आफ्नै देशबाट एमिरेट्समा बसाई सरे। तर 2009 मा मन्दी पछि। जब नयाँ युवाहरूले पृष्ठभूमिमा राम्रो स्कूलहरूको साथ आफ्नो घर देश छोडेका छन्। नयाँ र बैंकिंग प्रणाली मध्य पूर्वमा विकसित गरियो।
भारतीयहरू सधैं विश्वास गर्दछन् कि यदि उनीहरूले रोजगार पाउँछन् भने यो जीवनको लागि हुनुपर्दछ। उदाहरण को लागी केहि मानिसहरु जो पहिले नै युएईमा बसिरहेका छन्। त्यो अवस्थामा, भारतीय प्रवासीहरूले कसरी रोजगार प्राप्त गर्न जान्दछन्। तपाईले आवेदन गर्नु पर्ने पहिलो भूमिका सधैँ एक बैंक कैशियर वा बिक्री कार्यकारी हो। यो मनमा, तपाईं धेरै छिटो काम गर्न सक्नुहुन्छ। सकारात्मक पक्षमा, तपाईं निश्चित रूपमा बैंकमा एक घर भित्र सहायक प्रबन्धकलाई प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। वा तपाइँ एक वरिष्ठ प्रबन्धक स्थितिको लागी पनि आफ्नो क्यारियर व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ, तपाईं पनि गर्न सक्नुहुनेछ बैंकमा पोषण मागेको लागि आफ्नो मौका प्रयास गर्नुहोस्.
बैंकिंग मा क्यारियर प्रगति
एकै समयमा, दुबई बैंकिंग क्षेत्रमा यो धेरै छ जो मान्छे संयुक्त अरब अमीरात विदेश मा काम गर्दै छन् नेपथ्यमा। जस्तो कि यो हुन सक्छ, वित्त पोषण दृश्यहरू, यो गर्न कठिन काम भन्दा बढी छैन। सबै पछि, तपाईं अनगिनत घण्टा काम गर्नेछन् र अधिकतर मामलाहरुमा सार्वजनिक प्रबन्धन कहिल्यै नदेखाउने कडा कार्य देख्न सक्नुहुन्न। यस संग ध्यान मा, तपाईंको क्यारियर मुख्य रूप दुबई मा प्रगति मा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। क्यारियर शाखा र ग्राहक-सामना गर्ने भूमिकाहरूमा।
अन्य शब्दहरूमा, तपाइँ प्राय: शुरुवातमा कैशियरको रूपमा सुरु गर्नुहुनेछ जुन निश्चित छ। वा तपाईं धेरै भाग्य हुनेछ र ग्राहक सेवामा क्यारियर सुरु गर्नुहोस्। खाता प्रबन्धक वा स्टक मार्केट सल्लाहकार वा टोली प्रबन्धक बन्नको लागि महत्त्वपूर्ण यो यसले 10 वर्षको कडा काम गर्नेछ। नकारात्मक पक्षमा, तपाईंलाई थाहा छ नौकरी खोज र पदोन्नति उद्देश्यको लागि कसरी आफुलाई बजारमा ल्याउने। र जब तपाईं नयाँ भूमिकाको लागि पर्याप्त योग्य हुनेछ तपाईलाई सम्भावित सीईओमा आफ्नो क्षमता कसरी बिक्न जान्नुपर्दछ।
यद्यपि यो सत्य हुन सक्छ त्यहाँ छन् दुबईमा कसरी काम गर्ने। बैंकि sector क्षेत्रमा प्रगति गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। तर हरेक कम्पनीको साथ तपाईं प्रगति हुनेछ। उदाहरण को लागी, मध्य पूर्व र खाडी देशहरूको लागि ड्युश बैंकको स्थान परियोजना विस्तार योजनाहरू। तर मध्यपूर्वका बैंकरहरूले विश्वव्यापी रूपमा 250 भन्दा बढी कामहरू काट्न थालेका छन्। त्यसैले तपाईंलाई आवश्यक छ सफलताको लागि तपाइँको जीवन मार्ग छनौट गर्न बारेमा धेरै सावधान हुन.
दुबई शहरमा बैंकर क्यारियर खोज्दै
वित्त क्यारियर पदका उदाहरणहरू विशेष गरी रोजगारी दुबईका लागि भारतीय। यसलाई अर्को तरिकामा राख्नको लागि, राम्रो स्थानमा पहुँच पाउनको लागि तपाईंलाई यति धेरै नयाँ वित्तीयहरूको पहुँच गर्न आवश्यक पर्दछ सेवा भर्तीमा दुबई। तपाईलाई सम्झनको लागि पहिलो चीज मध्य पूर्व वित्तीय रोजगार बजारमा स्थितिका विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। आश्चर्यजनक रूपमा तपाईं दुबई शेयर बजार समाचारमा देख्न सक्नुहुन्छ कि वित्तीय क्यारियर बजार द्रुत रूपमा बढ्दैछ। विशेष गरी, दुबईमा बैंकिंग रोजगारीका लागि खोजी गरिरहेका नयाँ प्रवासीहरू र स्थानीय उम्मेद्वारहरूका लागि।
जडान तपाईको काम खोजीमा सफलताको कुञ्जी बन्नुभयो। सकारात्मक पक्ष मा, अमीरात मा उपलब्ध स्थिति एक loanण सल्लाहकार हो। यसबाहेक क्रेडिट कार्ड सल्लाहकार, कनिष्ठ बिक्री सल्लाहकार दुबईमा अधिक पटक उपलब्ध हुन्छन्। त्यस्ता परिस्थितिमा संयुक्त अरब एमिरेट्सका धेरै विभागहरू, साथै बीमा सम्बन्धित क्यारियर सेवा उत्पादहरू अब बैंकि industry उद्योगमा सामेल भए विशेष गरी 2018 मा कार्यका लागि.
दुबई शहर मा वर्तमान समयमा क्यारियर अग्रेषण को लागी अर्को मुख्य पोइन्ट क्यारियर खोज्नेहरु लाई। सामान्यतया, दुबईमा बैंकिंग सम्बन्धित रोजगारहरूको निर्देशिका हो। तपाई विश्वमै कर मुक्त भुक्तानको साथ कहिँ पनि पुग्न सक्नुहुन्न। र लामो दौडमा $ 100k ज्याला र बोनस वरिपरि युएई बाहेक यो धेरै धेरै अन्तहीन कहानी हो। दुबईमा कामका लागि लागु गर्नुहोस् ग्राहक बैंकिंग मा स्थिति को लागि, व्यावसायिक वाणिज्य बैंकि,, साथै लगानी बैंकिंग को रूपमा। दुबईमा मानव संसाधनको साथसाथै मार्केटिंग र सार्वजनिक सम्बन्ध क्यारियरको साथ। थप रूपमा दुबईमा लेखा खाताहरूप्रशासन र यस्तै प्रकारको आईटी क्यारियरले अब युएइमा व्यस्त बैंक चलाउन कम्पोनेन्टको अंश र पार्सल खेल्छ। अर्कोतर्फ, सबै बैंकहरूमा होईन संयुक्त अरब अमीरातमा कर्मचारीहरू केवल मानक ग्राहक-भुमिका भूमिकाहरू छन्।
दुबईमा बैंकिंग सेक्टरमा काम गर्दै
यो महसुस गर्न महत्त्वपूर्ण दुबईमा लगानी कर्मचारीहरू कडा परिश्रम गरिरहेका छन्। सामान्यतया बोल्दै, तपाईले प्रति हप्ता 48 घण्टा काम गर्ने समय खोज्नु पर्छ। किनभने धेरै चोटि यो कामका लागि तनावपूर्ण वातावरण हो र तपाइँ जसरी भए पनि जान जारी राख्नु पर्छ। अर्को कुञ्जी मध्य पूर्वमा काम गर्दै बैंकिंग क्षेत्र। सबैभन्दा बढी भागको लागि मध्य पूर्व फाइनान्सिभियर पोष्ट वित्तको संसारमा सबैभन्दा बलियो अवसरको मोटाइमा छ। बिहीबार र शुक्रबार मध्य पूर्वमा पारंपरिक दिन बन्द भएको जस्तो देखिन्छ। तर समय समयमा देखि शाखाहरूमा निर्भर गर्दछ यो यसले विश्वव्यापी कारोवारिक घण्टा घटाउँदै छ। हालको समय, बैंक प्रबन्धकहरूले हप्तामा तीन दिन मात्र परिवर्तन गर्छन् र धेरै अन्य बैंकले उदाहरण पछ्याएका छन्।
बैंकिंग क्षेत्र मा काम वातावरण धेरै प्रतिस्पर्धी छ। त्यहाँ धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासीहरू छन् जो बैंकिंग क्षेत्रमा कार्यरत छन्। उदाहरण को लागी एक नया संयुक्त अरब अमीरातमा पाकिस्तानी कार्यकर्ता। सँधै अन्य भारतीयहरू र दक्षिण अफ्रिकी प्रवासीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। किनभने वास्तविकतामा जब तपाईं युएइमा एक उचित रोजगारदाता पाउनुहुनेछ। यो चिट्ठा जित्ने जत्तिकै हो। तपाईं कल्पना पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दा बढी पैसा कमाउनुहुनेछ।
बैंकिंग कसरी दुबईमा प्राप्त गर्न
दुबईमा धेरै बैंक कर्मचारीहरुको लागि। शुक्रबार र शनिबारको रूपमा उपचारको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। तर सारांशमा, अधिकांश बैंकहरू लगातार मध्य पूर्व मा भर्ती अझै 50% बिहीबार बन्द र सबै दिन शुक्रवार बन्द छ। वर्तमान समय सम्म, त्यहाँ अझै दिन प्रति आठ घण्टा छन्। समय घण्टाको वरिपरि प्रबन्ध र वरिष्ठ व्यवस्थापन पदहरूको लागि इमान्दार हुन सक्छ तर अचानक सबै कुरा जुन तपाईं हाल बैंकमा काम गर्दै हुनुहुन्छ स्थितिमा निर्भर हुन्छ। तर यसको सामना गरौं, वित्त रोजगारीको अवसरमा नकारात्मक पक्ष राम्रो-भुक्तानी कार्यकारीहरूलाई एक 24 /7कार्य समय आवश्यक पर्दछ। ती परिस्थितिहरूमा, बैंकि manager प्रबन्धकले सहि समय तालिकाबद्ध गर्न सक्दछ जुन तपाईंले एक कार्यशील व्यक्तिको रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। यो दिमागमा, तपाईं जहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ नौकरी पत्ता लगाउन तपाईंको फोन प्रयोग गर्नुहोस्। यस तरिकाले युएइमा खास गरी सजिलो हुनेछ।
लागि महसुस गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ दुबईमा अनलाइन जागिर कि यदि तपाईं, उदाहरणका लागि, सही सूचना दिन बिना काम छोड्नुहोस्। वा तपाईं पनि बैंक वा वित्तीय व्यवसायमा आफ्नो कामबाट निकालिएको छ। त्यहाँका फाइलहरूमा निश्चित चिन्हको लागि त्यहाँ छ तपाईंले होटलमा नौकरी खोज्ने प्रयास गर्नुभयो। र तपाईं समान भूमिकामा एक नौकरी पाउन पनि प्रयास गर्नुहुने छैन यो संयुक्त अरब अमीरातमा फेरि वित्त पोषण गर्न असम्भव छ। अन्तिम विश्लेषणमा, तपाईलाई सचेत हुनुपर्छ कि तपाईको सामान्य कार्य सम्झौताको लागि बैंकिंग कार्य दुबईमा राज्यमा तपाईंले कम से कम 12 सम्म 24 महिना सम्म सम्बद्ध वित्तीय संस्थामा काम गर्न सक्नुहुन्न।
खाडीमा बैंकिंग प्रणाली
तपाईंले खाडी देशहरूको बारेमा थाहा पाउनु भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू। एक बैंकिंग प्रणाली हो र यी सबै कुरा कसरी काम गर्दछ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं संयुक्त अरब अमीरातमा काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने। तपाईलाई निश्चित गर्न आवश्यक छ संयुक्त अरब अमीरात भित्र। एक नकारात्मक भनेको यो हो कि तपाईंलाई दुबईमा सधैं सही स्थिति हुनु आवश्यक छ। उदाहरण को लागी जब तपाईं बैंक बाट क्रेडिट लिन शुरू गर्नुहुन्छ। तपाइँ पूर्ण रूपमा निश्चित हुन आवश्यक छ कि तपाइँ तपाइँको debtsण पूर्ण रूपमा तिर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
खाडीमा बैंकिंग प्रणाली एकदम फरक छ। को लागी संयुक्त अरब एमिरेट्समा उदाहरण। तपाईंसँग सँधै नम्बरमा एक बैंक खाता हुनुपर्दछ। तपाईंसँग योजनाबद्ध ओभरड्राफ्टहरू हुन सक्दैन। साधारणतया किनभने तपाईं जेलमा जान सक्नुहुन्छ यदि तपाईंले पूरा भुक्तानी गर्नुभएन भने।
कतर र कुवेतमा प्रणाली बैंकि very एकदम राम्रो छ, विशेष गरी दीर्घकालीन प्रयोगकर्ताहरूका लागि। यी देशहरूसँग तपाईसँग धितो राख्नको लागि राम्रो क्रेडिट परिणाम हुन सक्छ। यदि तपाइँ एक खोज्न चाहानुहुन्छ भने दुबईमा काम. तपाईं गर्नुपर्छ gआज तपाईंको सपनाको अवसर रब र पुन: सुरु गर्नुहोस् पृथ्वीमा सबैभन्दा बढ्दो बढ्दो बैंकिंग कम्पनीहरू!
बैंकिङ संयुक्त अरब अमीरातमा काम गर्न कम्पनीहरू
हामी एक पूर्ण सूची प्रदान गर्दैछौँ बैंकिंग कम्पनीहरु दुबईमा काम गर्न। हामी सबैलाई थाहा छ कि दुबई शहरले बैंकहरू प्रदान गर्दछ नयाँ एक्सट्याट्सका लागि खाली ठाउँहरू। धेरै कम्पनीहरूसँग र सहि दृष्टिकोण सम्भव छ। थप लगानी बैंकिंग क्यारियर व्यक्तिगत बैंकिंग सल्लाहकारहरूको साथ तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ संयुक्त अरब अमीरात बैंकहरूमा। त्यहाँ सधैं सम्भावना हुन्छ कि तपाईले आफ्नो बैंकमा काम खोज्ने क्रममा पर्याप्त सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुहुन्न। तर तपाईं बैंकिंग उद्योग भित्र आफ्नो क्यारियर पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईं पर्याप्त कडा खोज गर्दै हुनुहुन्छ विशेष गरी मध्य पूर्वमा। यो दिमागमा साथ, हाम्रो कम्पनीले प्रबन्ध गर्दछ तपाईका लागि उत्तम ठाउँहरू तपाईंले कामको लागि आवेदन गर्नु पर्छ.
स्थानीय कम्पनीहरूबाट ग्लोबल कर्पोरेटहरूमा। अब तपाईं वित्तीय बजारमा आफ्नै साहसिक कार्य सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कम्पनीले तपाईंको नयाँ क्यारियर सम्भावनाहरूको बारेमा अझ बढी कदम उठाएको छ। र हामीले सिर्जना गरेका छौं धेरै काम समूहहरू जहाँ तपाईंले काम पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईंको अनुभवको लागि उत्तम वित्तीय क्यारियर खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। र के कम्पनीहरूले पाउनको लागि लायक छन् त्यसमा एक नजर राख्नुहोस् मध्य पूर्वमा नयाँ क्यारियर अनुभवको उद्देश्य। यो तपाइँको लागि के फिट हुन्छ हेर्नुहोस्। र संयुक्त अरब एमिरेट्समा नयाँ पेशेवर क्यारियरको लागि आवेदन दिनुहोस्।
अमीरात एनबीडी मा नौकरी
यो कम्पनी यसको ग्राहकहरु को लागी एक अनलाइन सेवा प्रदान गर्दछ। एमिरेट्स एनबीडीले एचआर र हेड अफिस रिक्त स्थान पनि प्रदान गर्दछ। अर्कोतर्फ, कम अनुभवको साथ एक्सट्याट्सका लागि धेरै क्यारियर अवसरहरू प्रदान गरिनेछ। एउटै टोकन धेरै द्वारा नयाँ कार्यकारी बस दुबईतिर जान्छ। केवल यस कम्पनीको साथ संयुक्त अरब अमीरातमा कामका लागि।
एमिरेट्स एनबीडी प्रथम बन्द, उनीहरूको आफ्नै ग्राहकहरु लाई मन पर्छ। यो संस्थाले पनि एमिरेट्स एनबीडीको ग्राहक बन्नका लागि धन्यवाद पत्र पठाउँदै छ। वरिष्ठ व्यवस्थापन सुन्न को लागी प्यार गर्दछ सबै विस्तृत जानकारी र सल्लाहको बिटहरू। यसबाहेक, विचार र रायको साथ अरूलाई मद्दत गर्ने व्यवसायलाई अझ राम्रो बनाउन। यस फर्मले जहिले पनि एक अर्काको आदर गर्न अनुरोध गर्दछ। नयाँ कर्मचारी जहिले पनि मध्य पूर्व भित्र सबै नियम, सर्तहरू, र नीतिहरूको पालना गर्दछ। यस कारण यो कम्पनी दुबईमा बैंकिंग रोजगारको लागि उत्तम हो।
अमीरात बैंकिङमा क्यारियर दुबईमा रोजगारीको अवसरको विस्तृत दायरा प्रदान गर्दछ। समयावधिहरू एनबीडीमा सुरूवात पठाउँदै र नयाँ काम गर्ने आगन्तुकहरूको खोजीमा नयाँ युएईको लागि सबैभन्दा सिफारिस गरिएको कम्पनी भएको छ। एमिरेट्स एनबीडी एक प्रवासी जीवनशैलीको लागि काम गर्ने घण्टा अनुरूप.
यस कम्पनीका केही कामहरू बैंकिंगका लागि समावेश छन् अनुहारको सामना ग्राहक सेवा सहयोग। साथै, तपाईं डिजिटल स्टोर प्रबन्धकको रूपमा स्थितिको पनि जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँसँग तपाइँको सबै बैंकिंग क्यारियरको लागि यो कम्पनीको लागि आवश्यक राम्रो क्यारियर पथ हुन सक्छ। यो पनि लायक छ यस युएई फर्मसँग धेरै क्यारियर अन्य विकल्पहरूको लागि आवेदन दिनुहोस्.
एचएसबीसीसँग संयुक्त अरब अमीरातमा क्यारियरहरू
अर्को बैंक हामी सिफारिस गर्दैछौँ एचएसबीसीको लागि काम। यो कम्पनी व्यापक रूपमा पहिचान गरिएको छ र विश्वव्यापी रूपमा ब्रान्ड निर्माण गर्दछ। एचएसबीसी मध्य पूर्व मा भर्ती गर्ने सबै भन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बैंक बन्नुहोस्। र अब ठूलो सफलता संग उत्तरी अष्ट्रेलिया मा जाँदैछ। दुबई शहरमा काम गर्दै, HSBC मा धेरै शाखाहरु संग एक राम्रो र एकदम राम्रा विचार हो। किनभने तपाईं यस बैंकको साथ छोटो समयमा क्षेत्र प्रबन्धक बन्नको लागी लक्ष्य गर्न सक्नुहुन्छ।
यो बैंक जूनियर प्वाइंट स्तर सम्मको लागि एक राम्रो अवसर प्रदान गर्दछ हेड अफिस सी-कार्यकारीहरू वित्तीय ग्राहक सेवाहरूको भूमिकाको पूर्ण दायरा। यो कम्पनीको साथ रोजगारीको लागी खोज 300 देशहरूमा 14 कार्यालयहरूको नेटवर्कको माध्यम हो। निश्चित छ मध्य पूर्वमा काम गर्ने सबैभन्दा राम्रो ठाउँहरू.
कम्पनीले काम गर्दछ 3,000 व्यक्ति भन्दा बढी संयुक्त अरब अमीरातमा। उही समयमा, HSBC दुबई मा एक क्षेत्रीय मुख्यालय छ। त्यसोभए, वास्तविकतामा, यदि तपाईं उच्च स्तरको योग्यताहरूको साथ राम्रो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। निश्चित रूपले, आज नै आवेदन दिनुहोस् र बुक गर्न प्रयास गर्नुहोस् एक वरिष्ठ प्रबन्ध कार्यकारी प्रतिनिधि संग एक साक्षात्कार.
संयुक्त अरब अमीरात मा मानक चार्टर्ड बैंक
संयुक्त अरब अमीरातमा काम गर्ने तरिका हो मानक चार्टर्ड बैंक। एक ग्राहक सेवा मा सर्वश्रेष्ठ र विश्वको शीर्ष बैंकको रूपमा दर्जा दिइएको छ फोर्ब्स पत्रिकामा उच्च दर्जाहरू पनि थिए। शीर्ष प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू बीच। मानक चार्ट बैंकले मानिसहरूलाई सहयोग पुर्याउन र नयाँ उम्मेदवारहरू प्रति वर्षको लागि सहयोग पुर्याउँछ। यो बैंक उच्च मूल्याङ्कन तथ्याङ्क दिईएको उनीहरूलाई राजस्व बढाउन मद्दत गरेको छ। विशेष गरी एशियाभरि नयाँ उद्यमी र व्यापारिक सम्भावनाहरूलाई सहयोग गर्न, अफ्रिका, र मध्य पूर्व।
नयाँ रोजगार खोज्दै यस कम्पनीको साथमा एक खुशी छ। यसबाहेक, दुबईमा बैंकिङ कार्यहरू संयुक्त अरब अमीरातमा एससीबीसँग सजिलै पहुँचयोग्य छन्। कम्पनी भन्दा बढी छ 86,000 बजारहरूमा 62 कर्मचारीहरू। दिदै खाडीमा काम गर्ने कम्पनीहरूको वरिपरि एक उच्च भाँडा स्थिति। यस बैंकसँग 150 वर्ष भन्दा बढीको ईतिहास भित्र र बाहिरको आर्थिक व्यापारको कौशल छ। विश्वका सब भन्दा गतिशील क्षेत्रहरूमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले उनीहरूको व्यवसाय बढ्दै छ। उदाहरणका लागि कतार, कुवेत र साउदी अरेबिया। कम्पनी पनि मद्दत गर्दछ मोटर वाहन कम्पनीहरु काम गर्न खाडीमा यो उद्योग बढाउन बाहिर।
यो बैंक एक-समय शूटर होइन। फर्म उच्च राजधानीको साथ लण्डन स्टक मार्केटमा सूचीबद्ध छ। यस कारणको लागि, हांगकांग स्टक एक्सचेंजहरूले तिनीहरूलाई केही वित्तीय पुरस्कार दिन्छन्। सकारात्मक पक्षमा यदि तपाई एशियाई प्रतिनिधि हो जो विश्वव्यापी रूपमा काम गर्न इच्छुक छ। तपाईलाई यो कम्पनीलाई विचार गर्नु पर्छ तपाईंको साक्षात्कार क्यारियर अनुसन्धान। किनभने तिनीहरू मात्र होइनन् युएईमा काम गर्दै। एक व्यवसाय र साथ बम्बई कम्पनी कम्पनी र भारत मा राष्ट्रीय स्टक एक्सचेंजहरु मा व्यापार गरदैछ।
सेन्ट्रल बैंक अफ संयुक्त अरब अमीरात
सरकारी बैंकिंग क्षेत्र मा एक आधिकारिक क्यारियर। आउनुहोस् वेबसाइटबाट सुरू गर्नुहोस् of केन्द्रीय बैंक संयुक्त राष्ट्र अमीरात। यदि तपाईं दुबई लाई प्रमोशन को बारे मा भावुक हो भने कार्यस्थल मा जीवन शैली समानता र दैनिक जीवन मा गव रोजगार निश्चित रूप देखि तपाईंको लागि छ। दुबई र अबू धाबी मा एक पुल निर्माण र सरकार 2018 मा सिकाउने त्यो समावेशी संस्कृति अरबी संस्कृति को लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छ.
केन्द्रीय बैंक अफ संयुक्त अरब अमीरातको साथ, तपाईं हुन सक्नुहुनेछ डाटा प्रशासकको रूपमा पदहरू खोज्नुहोस् साथै धोखाधडी विश्लेषण निरीक्षकको रूपमा। केन्द्रीय बैंक भित्र कार्य को धेरै भित्र। तपाईले उच्च शिक्षित अधिकारीहरू भेट्टाउन सक्नुहुनेछ जो यस संस्था चलाउँदैछन्। केन्द्रीय बैंकको रिपोर्ट गतिविधिहरू उत्पन्न गर्दै। त्यसो भए त्यो प्रदान गर्दै सिधा यूएई सरकारका अधिकारीहरूलाई। यो कम्पनीले एमिरेट्स एयरलाइन हायरिंग म्यानेजरहरूसँग पनि नजिकबाट काम गरिरहेको छ।
केन्द्रीय बैंकको वित्तीय निर्माण र कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी छ। साथै, बैंकि structure संरचना उच्च वर्गीकृत गरिएको छ र सही अनुभवका साथ व्यक्तिहरू दुबई वा अबू धाबीमा काम गर्न सक्दछ। जब तपाईं यस कम्पनीसँग काम सुरु गर्नुहोस्। तपाईंको कर्तव्यहरू सुनिश्चित हुनेछन् कि संयुक्त अरब अमीरातको राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको विकास। र सधैँ सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको काम दुबईमा बैंकिंग कार्यको लागि सन्तुलित तरिकामा प्रतिनिधक।
मेश्रेक बैंक संयुक्त अरब अमीरात
अबू धाबी मा ग्राहकहरु को लागि एक बेहतरीन बैंक। Mashreq संग रोजगार अवसरहरू सधैं अनलाइन उपलब्ध छन्। कम्पनीले यती धेरै ताजा स्नातक विद्यार्थीहरूलाई सीनियर तहका स्थानहरूमा नेतृत्व गरेको छ। र ती छन् अब सी-स्तर क्यारियर खुला छ। मशरेक बैंकले नयाँ उम्मेदवारहरूको लागि अवसरहरूको सम्पत्ति भएको अधिकारीहरूलाई काममा लिए। कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय पेसेवरहरूलाई पनि भर्ती गर्दछ। उदाहरण को लागी फिलिपिन्सबाट र दक्षिण अफ्रीका।
यो कम्पनीको लगभग नयाँ सौ सौ रिक्त स्थानहरू छन्। तिनीहरू सबै खुल्ला छन् नयाँ नौकरी खोज्नेहरूको लागि विश्व बजारमा। फर्म फोकस विश्वभरबाट नयाँ प्रवासीहरूलाई आकर्षित गर्न र यसमा पाकिस्तान र भारत, उम्मेद्वार कामका लागि। ती परिस्थितिहरूमा, यदि तपाईं नयाँ सीपहरूको गुच्छाको साथ तपाईंको आफ्नै वित्तीय अनुभव विकास गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने। मश्रेक बैंक क्यारियर यस अवस्थामा छ, तपाईका लागि काम गर्नको लागि उत्तम ठाउँ। तपाइँको समय बर्बाद नगर्नुहोस् र उनीहरूसँग दुबईमा बैंकिंग रोजगारहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्।
ADIB बैंकमा क्यारियरहरू
मध्य पूर्वमा नयाँ उम्मेद्वारहरूको लागि ठूलो ठाउँ। अवश्य पनि, ADIB हो जहाँ तपाईं धेरै स्थानहरूमा क्यारियर सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। ADIB बैंक एक मानक वित्तीय संस्था मात्र होईन। को व्यवस्थापन त्यो कम्पनी जिम्मेवार कर्पोरेट व्यवसाय हुन प्रतिबद्ध छ। विशेष गरी संयुक्त अरब एमिरेट्स र साउदी अरेबियामा। कम्पनीले शाखा र आईटी विभाग भित्र रिक्त पदहरू सिर्जना गर्दछ। अर्को शब्दहरुमा, यदि तपाइँ तपाइँलाई कसरी गर्ने थाहा छ google job जस्तै आईटी प्रबन्धकले तपाईलाई सपना देखाउन सक्दछ ADIB संग अवसर.
आफ्नो बैंक संग क्यारियर तपाईं स्नातक र विद्यार्थीको रूपमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो बैंकमा धेरै धेरै छ संयुक्त अरब अमीरात मा नयाँ व्यक्तियों को लागि प्रोग्राम। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं एक अनुभवी पेशेवर व्यक्ति हुनुहुन्छ र अधिक व्यवसाय रिक्तताहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईं पनि धेरै वरिष्ठ प्रबन्धन कार्यका लागि आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। यस बैंकको शाखाहरूले खाडीका थुप्रै देशहरूमा बलियो उपस्थिति थियो। ADIB बैंक सहयोग गर्न दुबईमा नयाँ र अवस्थित कम्पनीहरू। यस संस्थामा प्रबन्धकहरूले नयाँ परियोजनाहरू पोषण गर्ने र अनावश्यक ग्राहकहरूलाई धनराशिको प्रबन्ध गर्ने।
चाहे तपाईं हो अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी कर्मचारी कामको खोजीमा। अथवा तपाईं केवल संयुक्त अरब अमीरातमा नयाँ रोचक चुनौती लिनु भएको छ। तपाईं दुबईमा स्नातक हुन सक्नुहुन्छ तर तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ ADIB बैंकको साथ आफ्नो करियर सुरु गर्नुहोस्। यो वित्तीय निगम को लागी तपाइँ को लागी रोजगार को पेशकश को एक धेरै छ। कम्पनीसँग दुबईमा प्रमोशन सम्भावना र नयाँ अवसरहरूको विस्तृत श्रृंखला छ। नकारात्मक पक्षमा, अधिकतर विकल्पहरू यस बढ्दो संगठनको साथ छिटो आउँदछन्। तर विश्वव्यापी वित्तीय बजारमा। त्यसैले हामी सिफारिस गर्दैनौं स्थानीय कामदारहरू साहस सुरु गर्न दुबईमा बैंकिंग रोजगारीका लागि।
दुबई इस्लामिक बैंकमा काम गर्नुहोस्
मध्य पूर्वमा मुस्लिम उम्मेदवारहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो बैंक। यदी तिमी दुबई वा अबु धाबीमा सफल क्यारियरको खोजी गर्दै। तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि इस्लामिक बैंक अब युएईमा काम गर्दैछ। सामान्यतया, यदि युएईमा एक दीर्घ-अवधि क्यारियर चाहानुहुन्छ भने। तपाईं दुबई इस्लामिक बैंक, व्यवस्थापन टोलीमा सामेल हुनुपर्दछ। यो संगठन इस्लामिक वित्त उद्योग मा एक अग्रणी बन्न। यी बुँदाहरू दिएका, तिनीहरूसँग छन् नयाँ उम्मेदवारहरूको लागि अचम्मको क्यारियर पोर्टल। निश्चित रूपमा, दुबई इस्लामी बैंकमा आवरण पत्रको साथ तपाईंको अद्यावधिक पुनः सुरु गर्नुहोस्।
सकारात्मक पक्ष मध्ये एक दुबई इस्लामिक बैंक 1975 मा स्थापित भएको थियो। त्यसो भए अग्रभूमिमा, तपाइँ दीर्घकालीन रोजगार संरचना अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। स्पष्ट दृष्टिकोण र वस्तुगत सोच भएका नयाँ उम्मेद्वारहरूले दुबई इस्लामिक बैंकलाई विचार गर्नुपर्छ। नकारात्मक पक्ष मा, हरेक व्यक्ति होईन। विशेष गरी कुनै पनि मुस्लिमले इस्लामिक शरियाको सिद्धान्त अनुसार बैंकि and र वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सक्दैनन्। त्यसैले यो बैंक धेरै अधिक छपाकिस्तानी, साउदी अरेबिया को लागी कलम, कतार र सामान्यतया मध्य पूर्वको बाँकी रहेको।
दुबई इस्लामिक बैंकलाई सम्झना हुनुपर्छ। निश्चित रूपमा, एक शीर्ष नियोक्ताको रूपमा एक व्यवसाय प्रतिष्ठा कमाई छ मध्य पूर्वी नौकरी चाहने को बीच विशेष गरी दुबईमा बैंकिंग क्यारियरको लागि। किनभने मूल मानहरू र उद्देश्य व्यवसायमा सबै स्टाफलाई समर्थन गर्नु हो। यस बाहेक, वरिष्ठ बैंक अधिकारीहरु यो बैंक बनाउन कोशिस गर्दै GCC मा सबै भन्दा राम्रो मध्ये एक.
दुबई इस्लामी शरिया बैंकिंग जॉब्स दुबई मा
कम्पनी विभाग भित्र एमबीए शिक्षा बढ्दै नयाँ उम्मीदवारहरु। यदि तपाईं तिनीहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ र अमीरातमा ग्राहक सेवाको अधिकतम स्तर प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने। आफ्नो हात उठाउनुहोस् र नयाँ रिक्तिका लागि आवेदन दिनुहोस् र इस्लामिक शरियामा नयाँ विकास प्रदर्शन ल्याउनुहोस्। दुबई इस्लामिक बैंकले निश्चित रूपमा दुबईमा उच्च स्तरमा बैंकिंग रोजगार प्रदान गर्दछ।
यद्यपि, यदि तपाईं धेरै राम्रो तरिकाले शिक्षित हुनुहुन्न भने। तपाईंसँग अझै पनि एक छ यस कम्पनीको साथ सपनाको क्यारियरको लागि मौका। किनभने दुबई इस्लामिक बैंकले नयाँ प्रतिभाशाली पेशेवरहरूको लागि विभिन्न दायरा प्रस्ताव गर्दैछ। तपाईंसँग परिवार पाएको प्रत्येक व्यक्तिलाई लगातार क्यारियर विकास प्रदान गर्दछ। दुबईमा बैंकिंग रोजगारीका लागि तपाईको घरका सदस्यहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन। र यो कम्पनीले तपाईंलाई लामो समयको लागि काम गर्ने अवसर दिन्छ। प्रत्येक नयाँ वा पुरानो कर्मचारीसँग थप पेशागत प्रगतिको लागि आफ्नै मौका छ।
दुबईको व्यावसायिक बैंक
दुबईमा पारिवारिक बैंक, सीबीडी परिवारको अंश बन्नको लागी तपाईंलाई राम्रो सुरू गर्न आवश्यक छ। कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीका लागि उम्मेदवारहरू खोज्ने ठूलो सम्झौता होइन। यदि तपाइँ पहिले नै दुबईमा बैंकिङ कार्यको लागि सारियो भने। तपाईंलाई निश्चित रूप देखि व्यावसायिक वाणिज्य बैंक दुबई को नवीनतम रिक्तिहरु मा एक नजर राख्नु पर्छ। सबै भन्दा राम्रो टोली प्रबन्धक वा सेल्स प्रबन्धकको रूपमा काम प्राप्त गर्न स्थान दिनुहोस्। किनभने अन्य ठूला बैंक निगमहरूको विपरीत। निश्चित रूपमा, तपाईं कम काम गर्न सक्नुहुनेछ र धेरै जान्न सक्नुहुन्छ।
CBD ले 1969 मा अपरेटिंग सुरू गर्यो र दुबईमा बैंकिंग रोजगार प्रदान गरेर अहिले सम्म सफलतापूर्वक प्रबन्धन गर्दछ। र दिवंगत रशीद बिन सईद अल मकतूम द्वारा जारी गरिएको अमीरी डिक्री द्वारा वित्त पोषित गरिएको थियो। यस बर्षको कम्पनीमा धेरै बढेको छ, तर हालको समयसम्म 35th मूल्याङ्कन स्थिति संयुक्त अरब एमिरेट्समा बैंकि sectors क्षेत्रहरूको साथ। खाडी क्षेत्र र मध्य पूर्वमा यसको विस्तार योजनाको एक हिस्साको रूपमा। CBD नयाँ व्यापार क्षेत्र तिर लाग्न थालेको छ। ती मध्ये एक रिटेल बैंकिंग र वित्त र इस्लामिक बैंकिंगको साथ एसएमई थियो। सामान्यतया बोल्दा, लागू गर्न लायक छ यदि तपाइँ स्थानीय हुनुहुन्छ र तपाइँ दुबैमा सरकारी क्यारियरको लागि बसोबास गर्नुहुन्छ.
दुबईमा RAKBANK मा क्यारियर
दुबईमा कामको लागि शीर्ष-मूल्याङ्कित स्थानीय कम्पनी। पृष्ठभूमिमा, तपाईं RakBank सँग अद्भुत अवसर पाउन सक्नुहुन्छ। कम्पनीले 2018 मा स्थानीय बजारलाई हिसाब गर्दैछ विज्ञापनहरूसँग। बैंकिंग क्षेत्रहरूमा सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन-प्रसारित विज्ञापनहरू। RAKBANK दिनको अपरेसन अफिस गर्ने। विशेष गरी स्थानीय दुबई शाखाहरु भित्र। यो कम्पनी व्यवस्थापन बैंकिंग को उच्चतम अन्तर्राष्ट्रीय र राष्ट्रीय स्तर प्राप्त।
अर्कोतर्फ, यो कम्पनीको एक बलियो साक्षात्कार प्रक्रिया छ। त्यसोभए उनीहरूबाट रोजगार प्रस्ताव पाउन सजिलो सौदा भएन। तपाईंले एक बौद्धिक चुनौती पार गर्न आवश्यक छ र भर्खर प्रबन्धक द्वारा साक्षात्कार गर्दा तपाइँको अनुभव साझा गर्दै। यस बैंक 2018 मा स्थानीय को ग्लोबल चाहनेहरुलाई सबैको लागि राम्रो छ। बैंकलाई नेशनल बैंक अफ रस अल-खामाह भनिन्छ। त्यसैले, दुबई सेममा बैंकिंग कार्यहरू RakBank सँग व्यवस्थापन योग्य।
राकब्यांकमा क्यारियर तपाईलाई हरेक दिन चुनौती दिईन्छ। अग्रणी खुद्रा वित्तीय सेवा भित्र अपरेशन व्यवस्थापन बाट। सानो र मध्यम व्यापार अपरेशनहरू सम्म। अहिले सम्ममा युएईमा रहेको बैंक पर्याप्त बृद्धि भइरहेको छ। हरेक दिन 720,000 नयाँ र अवस्थित ग्राहकहरूको सेवा गर्दै। र्याक-बैंकले 1976 मा सञ्चालन सुरू गर्दछ। त्यसैले यो छ बढि पदोन्नतिको सर्तमा तपाईले आशा गर्न सक्नुहुन्न। धेरै जसो भागका लागि, र्याक बैंक दुबईको सब भन्दा पुरानो स्थानीय वित्तीय संस्था हो जुन अझै पनि काममा छन्। 2018 र 2019 मा यसको सब भन्दा द्रुत बृद्धि भएको र सब भन्दा गतिशील बैंकको रूपमा मूल्या rated्कन गरियो। तर तिनीहरूले लेखा परीक्षण मा काम गर्न आवश्यक छ, र पनि अर्नस्ट जवान अडिट संग कठिन समय जाँदैछ.
पहिलो अबू धाबी बैंक
पहिलो अबु धाबी बैंकको साथ बैंकिंग क्षेत्र मा क्यारियर को कुलीन। को युएईका नागरिकहरूको लागि क्यारियर अवसरहरू एक्स्टेट्स भन्दा। पहिलो अबु धाबी बैंक स्थानीय वित्तीय बजारमा बढ्दै। युएई राष्ट्रियका लागि नयाँ रोजगार खाली स्थानहरू प्रदान गर्दै। सामान्यतया भन्ने हो भने यो बैंक अन्यसँग तुलनात्मक रूपमा नयाँ छ वित्तीय संस्था दुबई र अबू धाबीमा। 41 वर्ष भन्दा बढी दुबई र अबू धाबी मा कम्पनीको व्यापार।
अर्कोतर्फ, यो अबु धाबी कम्पनीमा काम गर्नु भनेको युएई कार्यकारीहरूका लागि ठूलो अर्थ हो। उदाहरण को लागी, टोली को हिस्सा हुनु युएई मा अत्यधिक सम्मानित छ। ताजा स्नातक विद्यार्थीहरू प्रतिभाशाली र जोशिलो व्यक्तिहरू सधैं FAB को साथ काम सुरु गर्न को लागी कोशिश गर्दै। किनभने यदि तपाईं खुला दिमागका व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईं यस संगठन भित्र वित्तीय लक्ष्य को बारे मा ध्यान साझेदारी साझा गर्न सक्नुहुनेछ। जबकि दुबई वा अबू धाबी सँगै काम गर्दै संयुक्त अरब अमीरातमा उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न।
दुबईमा बैंकिङ कार्यका लागि आवेदन गर्दा दिमागमा राख्नुहोस्। बैंक व्यवस्थापनले उनीहरूको कर्मचारीलाई उनीहरूको योग्यताका साथ सहयोग पुर्याउन मद्दत गर्दछ। तिनीहरूलाई विशेष शिक्षा केन्द्रहरूमा पुग्न मद्दत गरेर। साथै, नयाँ कर्मचारीलाई सहयोग पुर्याउन आवश्यक प्रशिक्षण र शिक्षा उत्तीर्ण गर्दछ। त्यसोभए के होईन यस शिक्षाको साथमा तपाईको शिक्षा तपाईले आफ्नो स्तर बढाउन सक्नुहुन्छ.
अमीरात इस्लामी बैंक
2004 मा अमीरात इस्लामिक शुरुवात सञ्चालन सामान्यतया कुरा, यो एकदम नयाँ वित्तीय संस्थान हो। दुबईमा एक बैंकिंग कार्य प्राप्त गर्दै यस संगठनको साथ सजिलो हुनुपर्दछ। किनभने जस्तो हामी सबैलाई थाहा छ नयाँ कम्पनीहरूले छिटो बढ्न मन पराउँछन्। विशेष गरी वित्तीय दुबई र अबु धाबी संस्था। नकारात्मक पक्ष मा, अमीरात इस्लामी बैंक मा नयाँ कर्मचारी। निश्चित रूपमा, तपाईंले बैंकि work सेवाहरूको उच्च स्तरहरू वितरण गर्न कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ। किनभने बढ्दो बैंकहरू छन् जो संयुक्त अरब अमीरात मा सबै भन्दा कठिन काम गर्दछ.
ढिलो होस् वा चाँडै नयाँ परियोजना अमीरात इस्लामिक बैंकको साथ आउँनेछ। त्यसो भए नयाँ उम्मेदवारहरू साक्षात्कार गर्दा थाहा पाउनु पर्छ के गर्न सकिन्छ। यो बैंकले राम्रा राम्ररी काम गर्दछ जसमा शाही सिद्धान्तहरुको उच्चतम स्तर संग। साथै, अरबी संस्कृति अत्यधिक यस वित्तीय कम्पनीसँग जोडिएको छ।
यस बैंकबाट सुरू गर्ने सबैभन्दा स्मार्ट तरिका। निश्चित रूपमा ग्राहक सेवा स्थिति छ। यस स्थिति को कर्तव्य मा आफ्नो नयाँ र अवस्थित ग्राहकहरु लाई उत्पादन को एक विस्तृत श्रृंखला को पेशा शामिल छ। तर एक क्षण मा तपाईं पदोन्नति र अलग सारिन सकिन्छ एक व्यक्ति सल्लाहकार वित्तीय स्थिति बाट। र त्यसपछि साना व्यवसाय उद्यमीहरूको साथ साथै ठूला निगमहरूलाई मद्दत गर्दै। अमीरेट बजारमा बढ्नको लागि। इस्लामी बैंक सही छनौट हो जो कि आपरेशन प्रबंधन क्यारियर मा उत्कृष्टता खोज्दै छन्.
दुबई ADCB मा बैंकिंग जॉब्स
प्रत्येक कर्मचारीको लागि व्यक्तिगत दृष्टिकोण र अरूलाई मद्दत गर्ने। एडीसीबी बैंक कामको लागि राम्रो स्थान हो। यी वित्तीय निगमहरूको व्यवस्थापनको आफ्नै उद्देश्यहरू हुन्छन्। उही समयमा, ADCB एक्सपो 2020 को प्रतीक्षा गर्दै। बैंक हुन्छ संयुक्त अरब इमिरेट्समा सब भन्दा मूल्यवान। वरिष्ठ व्यवस्थापनले घोषणा गरे कि तिनीहरू अबु धाबीमा controlण कन्ट्रोलरहरूको एक मुख्य स्रोतको रूपमा विकसित हुनेछन्।
एडीसीबी पहिलो वर्षको निर्माणमा 1985 मा बसियो। तब देखि बैंक बढेको छ। र संयुक्त अरब अमीरात सरकार को लागि यसको उपस्थिति उत्कृष्ट मूल्यवान थियो। बैंक सभ्य लगानीको साथ सुरु भयो। अर्को निगमको साथ बलियो गर्न अगाडी अगाडी बढेको बल। एडीसीबीको भर्ती प्रबन्धकहरू अन्तर्राष्ट्रिय उम्मेदवारहरू भर्ना गर्न शक्तिशाली महत्वाकांक्षा छन्। नयाँ एक्सटेट्सले मानव संसाधन विभागमा CV अपलोड गर्न अनुमति दिएको छ। यो बैंकले महिलाको बिदाको लागि पनि धेरै अवसरहरू प्रदान गर्दछ।
दुबै संस्थामा बैंकिंग रोजगारीको खोजी कसैको लागि समस्या नहुन सक्छ। किनभने व्यवस्थापन टोली नयाँ उम्मीदवारहरू पछ्याउन र नयाँ आन्तरिक खाली ठाउँहरू पूरा गर्नमा चासो राख्दछ। यस बैंकको साथ सुरू गर्न क्यारियर अवसर तपाईंले काम साइटमा आवेदन गर्न आवश्यक छ.
तपाईंको पुनःसुरु अपलोड गर्दै निश्चित रूपमा तपाईलाई संसार भर बाट नयाँ सहकर्मीहरु संग काम गर्न सक्षम गर्दछ। एडीसीबीसँग काम गर्दा मध्य पूर्व देखि ग्राहकहरूको सेवा समावेश गर्दछ। किनकि यो दुबईमा बैंकिंग रोजगारीका लागि उत्तम कम्पनी हो।
ADCB बैंकबाट रिक्त स्थानहरूमा जानुहोस्
जस्तै, ठाउँमा धेरै रिक्त पदहरू प्रदान गर्न सकिन्छ। दुबईमा एडीसीबी बैंकिंग कार्यका लागि सञ्चालनका सबै प्रमुख क्षेत्रहरूमा कार्यकारी सङ्गठन समावेश गर्दछ। आधारभूत खुदरा ग्राहक सेवाको साथ सुरू गरौं। त्यसपछि तपाईं व्यावसायिक र लगानी बैंकिंग विभागमा जान सक्नुहुन्छ।
त्यसोभए वरिष्ठ प्रबंधन प्रकार्यहरूलाई समर्थन गर्नुहोस् दुबईमा व्यापार कार्यकारी सल्लाह। तपाईं मानव संसाधन रिक्तताहरू पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ। र अन्तमा तपाई दुबई विभागहरूमा टेक्नोलजीज र मार्केटिंग बैंकिंग कार्यहरूमा जान सक्नुहुन्छ। एडीसीबी बैंक अबू धाबी, दुबई, शारजाह र अल ऐनमा विभिन्न स्थानहरूमा शाखाहरू प्रबन्ध गर्दै।
दुबई नवल बैंकमा रोजगारी
अर्को कम्पनी हो जहाँ तपाइँ तपाइँको CV पठाउनु पर्छ नूर बैंक हो। पहिले नूर इस्लामिक बैंकको रूपमा चिनिन्थ्यो। पहिलो शाखा दुबईमा जनवरी 2008 मा स्थापित भयो। त्यस बेला देखि सफलतापूर्वक संयुक्त अरब एमिरेट्समा हुर्कियो। छोटो अवधिमा रोजगार खोज्ने नूर बैंकसँग सम्भव छ।
यो नियोक्ता एक छोटो समयमा धेरै बढेको छ। नोर बैंक एक प्रदान गर्दछ संयुक्त अरब अमीरात मा नौकरिहरु को विस्तृत श्रृंखला। उदाहरण को लागी, ग्राहकहरु लाई उत्पादनहरु र सेवाहरु को बिक्री। अवस्थित ग्राहकहरुका लागि लगानी पोर्टफोलियो प्रबन्ध। दुबईमा नयाँ व्यापार बढाउन र नयाँ कर्पोरेट बैंकिंग प्रणालीहरूको लागि रिपोर्ट उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दै। सबै भन्दा राम्रो सेवाहरू मध्ये एक सम्पत्ति व्यवस्थापन हो। तपाईले रोजगार प्रस्ताव पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ एक बीमा सल्लाहकार को रूप मा। यसबाहेक, ट्रेजरी, र ट्रेडिंग कार्यकारी विशेषज्ञ।
नाउ बैंक फर्मले एनएन इन्भेस्टमेन्ट समूहको स्वामित्वमा रहेको एनएनएनएमएमएक्स प्रतिशतको स्वामित्व छ। अर्कोतर्फ, 95 प्रतिशत अमीरात इन्भेस्टमेन्ट प्राधिकरणको हो। तर सकारात्मक पक्षमा, व्यक्तिगत निवेशकहरूको स्वामित्वमा शून्य बिन्दु पनि छ। र व्यापार मालिकहरू र संयुक्त अरब अमीरातका निगमहरू पनि। दुबईमा बैंकिङ कार्यका लागि नूर बैंकसँग संयुक्त अरब अमीरातमा उच्च प्राधिकरण छ।
युनाइटेड अरब बैंकसँग बैंक क्यारियर
अर्को कम्पनी जहाँ तपाइँले पुनःसुरु पठाउनु पर्छ संयुक्त अरब बैंक हो। यो कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय शीर्ष प्रतिभा अधिकारीहरु को भर्ती गर्न खोज्दै। ती परिस्थितिहरूमा, यदि तपाईं उच्च शिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ भने। तपाइँ सुरू गर्न सक्नुहुन्छ एक जोश संग काम गर्दै वित्त गर्न। निश्चित रूपमा कम्पनीबाट फिर्ताका लागि, संयुक्त अरब बैंकले सीधा अवसर प्रदान गर्दछ। निश्चित रूपमा घरमा नयाँ अवसरहरू उठाइयो। संयुक्त अरब बैंकको साथ तपाईं आफ्नो क्षमता विकास गर्न र व्यावसायिक रूपमा बढ्न सक्नुहुन्छ।
बैंकिंग कार्य दुबईमा अल हिलाल बैंक
युएईमा सबैभन्दा नयाँ बैंक मध्ये एक। यो कम्पनी उच्च मूल्या highly्कन गरीएको छैन। तर तपाइँको अर्को कम्पनी हुन सक्छ जहाँ तपाइँ रोजगार शुरू गर्नुहुन्छ। आधिकारिक वेबसाइट खाताले भने कि अल हिलाल बैंक भर्ती छ। बैंकमा शाखा प्रबन्धकले सधैं बैंकिंग प्रणालीलाई सजिलो बनाउन कोसिस गरिरहेको छ। को क्यारियरका अवसरहरू सुपर स्मार्ट अधिकारीहरूको लागि डिजाइन गरिएको छैन। धेरै रोमांचक अवसर पनि छैन। तर अझै यो बैंकले रोजगारी प्रदान गर्दछ। त्यसो गर्दा तपाईं अझै पनि जागिर खोज्दै हुनुहुन्छ। मुख्य इस्लामी मूल्यहरूको लागि साँचो प्रयास गर्नुहोस्। सबैभन्दा बढी भागको लागि, अल हिलाल बैंकको सुरुवात जून 19 को 2008th बाट सञ्चालन हुन्छ। अबू धाबी इन्भेस्टमेंट काउन्सिल द्वारा स्थापित निवेश को संक्षेप को लागि। यो कम्पनी अबू धाबीमा पहिलो शाखा सञ्चालन भएको छ।
दुबईमा डीबीएस सिंगापुर बैंकमा क्यारियर
बैंकको बारेमा सत्य यो कम्पनी सिंगापुरको विकासले व्यवस्थित छ। र यो वास्तवमा तपाईंको लागि राम्रो जानकारी हो। किनभने तपाईंको क्यारियरमा बलियो वृद्धि चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु संलग्न दुबईमा बैंकिंग रोजगारहरूलाई अचम्मका इग्निशन र असंख्य सम्भावनाहरू आवश्यक छन्। मध्य पूर्व रोजगार बजारमा सबै भन्दा द्रुत अन्तर्राष्ट्रिय रिक्त स्थानहरू। एक डीबीएस बैंक एक्लो स्पार्कलिंग आनन्द मात्र होइन। तर वित्तीय ज्ञान यस कम्पनीको मुटु हो। र निश्चित रूपमा, यस कम्पनीको व्यवस्थापनलाई नयाँ ग्राहकहरु लाई के गर्ने थाहा छ।
DBS कम्पनी अवलोकन एशिया मा एक अग्रणी वित्तीय सेवा समूह हो। हरेक दिन यस कम्पनीले काममा लिइरहेको छ खाडी र एशिया वरिपरि शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति। दुबईको यो सिंगापुर बैंकको विश्वव्यापी 250 मार्केटमा 17 भन्दा धेरै शाखाहरू छन्। नकारात्मक पक्ष को मुख्यालय सिंगापुर को रूप मा सूचीबद्ध छ। त्यसोभए सी-स्तर बैंक म्यानेजर खाली पदका लागि भाडामा लिन यो सजिलो नहुन सक्छ। सबैभन्दा नराम्रो अवस्था तपाईले सि Singapore्गापुर उड्न सक्नुहुन्छ। डीबीएस बैंक, लामो समय मा, एक छ संयुक्त अरब अमीरातमा बढ्दै उपस्थिति.
कम्पनीले धेरै पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो। उदाहरणका लागि एशियामा अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूका लागि सबैभन्दा सुरक्षित बैंक। 2009 बाट 2014 सम्म लगातार छ वर्षको लागि ग्लोबल फाइनान्सबाट थप उच्च रेटिंग्स। र पनि भएको छ खाडी क्षेत्र क्षेत्रमा यसको नेतृत्वको लागि मान्यता प्राप्त। अधिक पुरस्कार जानकारीको लागि उनीहरूको पृष्ठ भ्रमण गर्नुहोस् जहाँ तपाईं दुबईमा बैंकिंग रोजगारी पाउन सक्नुहुन्छ।
अन्य कम्पनीहरू बैंकरको रूपमा काम गर्न
त्यहाँ थुप्रै कम्पनीहरू बैंकिंग अनुभवको साथ काम गर्नका लागि छन्। दुबई सिटी कम्पनी सधैं गर्व भएको छ कार्य प्रस्तावहरू उपलब्ध गराउँदछ। विशेष गरी जो ब्लूमबर्ग वा अर्नेस्ट जवानको रूपमा यस्तो कम्पनीहरूको लागि काम गर्ने पर्याप्त अनुभव छ। तपाईंले एक पृष्ठ लाइ गर्नु अघि केही अन्य कम्पनीहरू तपाईंले भ्रमण गर्नुपर्छ। अनगिन्ती क्यारियरका अवसरहरूले बजारमा सबै भन्दा कठिन खेलाडीहरूको पर्खाइरहेको छ। यस स्थितिमा रोजगारी खोज तपाईको युद्धक्षेत्र हो।
हामीले तपाईंलाई ब्लूमबर्गमा क्यारियरको लागि विश्वास दिलाउन आवश्यक छैन। शीर्ष मूल्या rated्कन गरिएको विशाल निगमहरू विश्वभरि प्रसिद्ध हुन्छन्। देख्न सकिन्छ, ब्लूमबर्ग कर्पोरेशन यो हो, निर्विवाद सूचना नेता। यो फर्म दैनिक संचालन गर्दछ वित्तीय बजार मा र उच्च गुणवत्ता वित्तीय समाधान प्रदान। विशेष गरी अवस्थित ग्राहकहरूको लागि। ब्लूमबर्गले प्रदान गर्ने एक मुख्य सेवाहरू। वास्तविक समय र ऐतिहासिक डेटा व्यवसाय र वित्तीय पेशेवरहरु लाई विश्वव्यापी रूपमा छ।
व्यवस्थापन हरेक दिन धेरै मेहनत गर्दै। अहिलेको समयसम्म कम्पनीले काम गरिरहेको छ बजार मा सब भन्दा छिटो। जबकि अन्य वित्तीय निगमहरूले क्वालिटी र सटीकता कायम गर्दै ब्लूमबर्गले परिणामहरू पहिले नै परिचित भइसकेका छन। मानव संसाधन विभाग मा वरिष्ठ प्रबंधन आफ्नो टीम को दुनिया मा सबै भन्दा राम्रो बाहिर ल्याउँछ। समग्र एक अर्कालाई यस कम्पनीको लागि नयाँ उम्मेद्वार आविष्कार गर्दैछ र विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय बजारको भविष्य पुन: खोजी गर्दैछ।
तपाईं यहाँ अचम्मको काम गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो क्यारियर विकास अवसरहरूले तपाईंलाई आवश्यक सबै स्रोतहरू दिनेछ तपाइँको पूर्ण क्षमतामा पुग्नको लागि तर यो तपाइँमाथि निर्भर हुन्छ यो हुने बनाउनका लागि।
युएईमा संयुक्त अरब अमीरातमा काम गर्नुहोस्
सामान्यतया वित्तीय रिक्त पदहरूको बारेमा कुरा गर्दै। हामीले कार्यको लागि शीर्ष कम्पनीहरूको सूचीमा EY थप्नु पर्छ। किनभने यो संगठन आश्वासनको साथसाथै कर, लेनदेनमा विश्वव्यापी नेता हो। र लगानीकर्ताहरूका लागि सबै भन्दा राम्रो वैश्विक सल्लाहकार सेवाहरू। अर्न्स्ट र युवासँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 167,000 भन्दा बढि कर्मचारीहरू छन्। तिनीहरू सबै मुख्य वित्तीय मान साझा गरेर एकजुट भएका छन्। संयुक्त अरब एमिरेट्समानयाँ कम्पनीहरूले सँधै नयाँ वित्तीय सल्लाहकारहरूलाई प्रेरणा दिन्छन्। र EY मानिसहरू विश्वभर काम गरिरहेका छन् र सँधै सही काम गर्नुहोस्। यसैले यो कम्पनी अमीरातमा जान्दछ। तिनीहरूले उचित रूपान्तरण र वित्तीय गुणस्तरको सेवाको प्रतिबद्धता निर्माण गर्छन्।
बैंकिङ क्यारियरका लागि निष्कर्ष
हामीसँग आशा छ कि हामीसँग छ तपाईंको लागि मुख्य विस्तृत गाइड कभर गर्नुहोस्। दुबईमा बैंकिंग रोजगारीका लागि तपाईंलाई काममा लिइनेछ भन्ने आशा राख्दै। जब तपाईं यी सबै वेबसाइटहरूको लागि आवेदन गर्नुहुन्छ। तपाईंले निश्चित रूपमा बैंकिंग रोजगार प्रस्ताव प्राप्त गर्नुपर्नेछ। वा अर्को तर्फ, कम्तिमा केहि राम्रो रोजगार जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्। विशेष गरी दुबई र अबु धाबीमा नयाँ स्थानीय हायरिंग आवश्यकताहरूको बारेमा। हाम्रो टोलीसँग ठूलो आशा छ कि तपाईंलाई हाम्रो पोष्ट मनपर्दछ। तपाईंले यसलाई फेसबुक र ट्विटरमा साझेदारी गर्नुहुनेछ अन्यलाई मद्दत गर्न। भाग्यले साथ दिओस् मध्य पूर्व पर्यटकहरू र क्यारियर खोजी।